#संविधान दिवस | Suvadin !
बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा फहराइने
एजेन्सी । नेपालको संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपाली झण्डा संसारकै अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा फहराइने भएको छ । यूएईको स्थानीय समयानुसार शुक्रबार साँझ ९:१० ( १० बजेर ५५ मिनेट नेपाली समय) मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवनमा पहिलो पटक फहराउन लागेको नेपाली दूता...
Suvadin Media 362 0
काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले २ सय ६० कैदीको बाँकी कैदको सजाय कट्टा गरेको छ भने २२ कैदीलाई माफी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सजाय माफी दिएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान...
संविधान 'मान्‍ने-नमान्‍ने' बहस होइन, अपनाउने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ !
संविधान दिवस विशेष नेपालको संविधान-२०७२ जारी भएको आज चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान बमोजिमका संघीय संरचनाहरु लगभग पूरा भएका छन् । जसअनुरुप मुलुकमा ७६१ सरकार गठन भएका छन् । सरकारकै भाषामा भन्‍ने हो भने गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ । संविधानको स्वीकार्यता, परिपालना र कार्यान्वयनको...
Suvadin Media 322 0
नेपालको संविधान दिवसमा बेलायती महारानीको शुभकामना
काठमाडौं । नेपालको संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरुले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । संयुकत अधिराज्य (बेलायत)की महारानी एलिजाबे द्वितीयाले पनि संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई शुभकामना व्यक्त ग...
संविधान दिवसको अवसरमा २६० जना कैदमुक्त, २२ जनाको सजाय माफी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ सय ६० जना कैदी–बन्दीको कैद कट्टा गरेकी छन् । २२ जनाले सजाय माफी पाएका छन् । संविधानको धारा २७६ को फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसुर नियमावली, २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदी–बन्दीको कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ...
संविधान दिवसमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ को को हुँदैछन् विभूषित ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । मुलुकभर आज चौथो संविधान दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सरकारले संविधान घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै दिपावलीसहित संविधान दिवस मनाउन अनुरोध गरेको छ । नेपालमा भएका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको ऐतिहासिक दिनका रुपमा...
संविधान दिवसमा नेपाली सेनातर्फ को को हुँदैछन् विभूषित ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी उल्ट्याउनका लागि केही अराजक तत्वहरु लागि परेको बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले व्यवस्थाकै विरुद्ध लागि परेकाहरुले जनतालाई भ्रममा पार्न विभिन्न गत...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत दिवसले नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्...
संविधान दिवसमा शुभकामना, कसले के भने ?
फाइल तस्बिर काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र समावेशीता प्रत्याभूति गरेको बताएकी छन् । संविधान दिवस, २०७६ का अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीमा सुख, शा...
संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा, विभिन्‍न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाण्डौं । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको शुक्रबार चार वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको दिनको सम्झना गर्दै केन्द्र, प्रदेश र पालिकामा विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधान दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले विश...
संविधान दिवसमा मापदण्डविपरीत डिआइजीलाई पदक दिइँदै, आईजिपीको नाम काटियो
काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गरिने पदकका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मापदण्डविपरीत एक डिआइजीलाई पदकको सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा भएको एक वर्ष नपुगी पदकका लागि सिफारिस नगर्ने मापदण्ड बनाएको भए पनि त्यसको विपरीत डिआइजी हरि पाललाई पदक सिफारिस गरेको गृह मन्त्रालय स्रोत...
Suvadin Media 309 0
संविधान दिवसमा भीड जम्मा गर्ने र 'वार्गेनिङ अस्त्र' बनाउने प्रवृति अन्त्य होस् !
असोज ३ गते अर्थात पर्सी शुक्रबार नेपालको वर्तमान मूल कानुन अर्थात् ‘नेपालको संविधान-२०७२’ जारी भएको चार वर्ष पूरा हुँदै छ । यस अवसरमा सरकारले यसपालिको संविधान दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’समेत घोषणा गरेको र विशेष उत्सवकै रूपमा मनाउन निर्देशन जारी गरेको छ । यसै अवसरलाई लक्षित गरी &...
संविधान दिवसमा कुन आकारका झण्डा हातमा र कुन आकारका झण्डा घरघरमा ?
काठमाडौं । विश्वमै आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको नेपालीको शान राष्ट्रिय झण्डा विगतका सरकारी कार्यालय र सरकारी प्रयोजनमा राखिन्थ्यो । सरकारले कार्यविधि संसोधन गरेर राष्ट्रिय झण्डालाई नागरिकको घरघरमा राख्न पाउने व्यवस्था मात्रै गरेन, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले कार्यालयमा र सवारी सधान भित्रसमेत सम्मानप...
संविधान दिवसमा प्रयोग गरिने छ यस्तो टि-सर्ट
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले संविधान दिवसमा प्रयोग गरिने टि-सर्टको नमूना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालले आफ्नो वेबसाइट मार्फत एउटा सूचना जारि गर्दै उक्त दिन आयोजना हुने औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिने झन्डाको आकार पनि तोकेको छ । सरकारले संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज ३ लाई भव्य र...
Suvadin Media 366 0
फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य, संविधान दिवसलाई झन्डामय बनाउन उर्दी !
काठमाडौं । संविधान दिवसका दिनदेखि मुलुकभरका फिल्म हलले चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने भएको छ । असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउनका लागि मूल समारोह समिति गठन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सरकारका सबैजसो मन्त्री र सचिवसहितको बैठकले सञ्चार तथा...
DilipKarki 384 0